कसले सुन्ने बालकको चीत्कार ? पेटको प्वालबाटै खस्छ दिसा (भिडियो सहित ) - TV Annapurna
May 20, 2018 May 26, 2018 Annapurna TV
विमल खड्का, टिभी अन्नपुर्ण,
मानिसको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्ने कुरा छुट्टै बहसको पाटो होला, तर प्राकृतिक रूपमा संसारमा विभिन्न प्रकारका मानिस भेटिन्छन् । कतिपय जन्मपश्चात् विभिन्न समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् भने कतिपय मानिसलाई जन्मनुभन्दा पहिले नै प्रकृतिले नै ठगेको हुन्छ । यस्तै प्रकृतिले ठगीएका एक बालक बागलुङ जिल्लाको बढिगाड गाउँपालिका – ४ नौतुवामा एक अनौठो बालक जन्मिएका छन् । हेर्दा लाग्न सक्छ सबै प्रकारले सबल छ । उसको शरीरमा कुनै खोट छैन आँखा , हात खुट्टा सबै ठिक छन् । उसको हेराई पनि ठिक छ । वैशाख १९ गते आमा जुन सुनार र बाबु कृष्ण सुनारको कोखबाट जन्मिएका छोराको न्वारान पनि भएको छैन । बुबाआमाले ठुलै समस्या झेल्नु पर्‍यो । जन्मिएको ७ औँ दिनमा न्वारान गरिदिने बाबुआमा सोचिरहेका थिए । बच्चा जन्मिएको २ दिन भएकोे थियो बच्चाले आमाको दूध पनि राम्रै चुसीरहेकै थियो ।
आमाबुवाले न्वारान पनि गरिनसकेका छोरा झट्ट हेर्दा हेरिरहरु जस्तो लागिरहने संसार देखेकोे २ दिन भयो । त्यो सँगै बच्चाको पेट पनि पहिलेको भन्दा ठुलो हुँदै गएको थियो २ दिनको मध्येरातीबाट बच्चाले आँखा नै हेर्ने छेडायो ।
आमाबाबु : मरेपछि घरै लगेर सतगत गरौँला
४ दिन सम्म आइसीयुमा राखियो बच्चा आमाले डाक्टरलाई किन यस्तो भयो भनि प्रश्न सोधिन् बच्चाको दिसा आउने आन्द्रा नै दिसा गर्ने प्वाल सम्म नआएकाले बच्चाको पेटबाट दिसा आउने गरि अप्रेसन गरिदिएको डाक्टरले बताइदिए ।बच्चाको अप्रेसन त ,भयो डाक्टरले बच्चाको फेरी अप्रेसन एक हप्तापछि गर्ने भनेपछि उनीहरु पैसा अभावकै कारण काठमाडौं छाडेर दुधेबालक लिएर पेटबाट दिसा चुहाउदै घर पुगेका छन् । बच्चाकी आमा जुनु भन्छिन् बच्चा बचाउन सकिन्न कि भन्ने चिन्ता थियो तर अहिले सबैको प्रयासले बच्चा बच्यो । ३ चोटी बच्चाको अप्रेसन गनुपर्ने डाक्टरले भन्नुभएको छ । पैसाको जोहो पनि गर्नैप¥यो त्यसैले घर आएका छौँ । उनले भन्छिन् दुखको बेला वडा अध्यक्षले समेत आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको भनि सिफारिस नदिएको भन्दै गुनासो गरिन् । यसरी पेटबाटै दिसा गरिरहने नाम पनि नभएका बच्चालाई डाक्टरले ३ पटक अप्रेसन गनर्’पर्ने भने पछि परिवारमा थप आर्थिक समस्या देखिएको छ बच्चा अहिले पेटकै एक कुनाको प्वालबाटै दिसा गरिरहेको छ । अहिले यसरी बच्चाको पेटको कुनै कुनाबाट यसरी दिसा गर्ने भएपनि पछिका दिनमा कति अप्ठ्यारो होला ? यस्तो मनर्’न बाच्नुको दोसाधमा रहेका बालकलाई तपाई र अहिलेको बलियो सरकारले उचित सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रस्तुत
यात्रु कोच्ने २ सय माइक्रो र टेम्पो कारवाहीमा